प्रायः सोधिने प्रश्नहरु - याang्झाउ Wooten मचान कं, लिमिटेड
तपाइँको मूल्यहरु के हो?
हाम्रो मूल्यहरु आपूर्ति र अन्य बजार कारकहरु को आधार मा परिवर्तन को अधीनमा छन्। हामी तपाइँलाई तपाइँको कम्पनी हामीलाई थप जानकारी को लागी सम्पर्क पछि एक अपडेट मूल्य सूची पठाउनेछौं।
के तपाइँसँग न्यूनतम आदेश मात्रा छ?
हो, हामी एक निरन्तर न्यूनतम आदेश मात्रा को लागी सबै अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरु को आवश्यकता छ। यदि तपाइँ पुनर्विक्रय गर्न को लागी देख्दै हुनुहुन्छ तर धेरै सानो मात्रा मा, हामी तपाइँलाई हाम्रो वेबसाइट को जाँच को सिफारिश गर्दछौं
के तपाइँ सान्दर्भिक कागजात आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी विश्लेषण / अनुरूपताको प्रमाणपत्र सहित धेरै कागजात प्रदान गर्न सक्छौं; बीमा; उत्पत्ति, र अन्य निर्यात कागजात जहाँ आवश्यक छ।
नमूनाहरु को लागी, नेतृत्व समय को बारे मा7दिन छ। सामूहिक उत्पादन को लागी, नेतृत्व समय जम्मा भुक्तानी प्राप्त पछि 20-30 दिन हो। नेतृत्व समय प्रभावी हुन्छ जब (१) हामीले तपाइँको निक्षेप प्राप्त गरेका छौं, र (२) हामी तपाइँको उत्पादनहरु को लागी तपाइँको अन्तिम अनुमोदन छ। यदि हाम्रो नेतृत्व समय तपाइँको समय सीमा संग काम गर्दैन, कृपया तपाइँको बिक्री संग तपाइँको आवश्यकताहरु मा जानुहोस्। सबै अवस्थामा हामी तपाइँको आवश्यकताहरु लाई समायोजित गर्ने कोशिश गर्नेछौं। धेरै जसो अवस्थामा हामी त्यसो गर्न सक्षम छौं।
तपाइँ कस्ता प्रकारका भुक्तानी विधिहरु स्वीकार गर्नुहुन्छ?
तपाइँ हाम्रो बैंक खाता, वेस्टर्न यूनियन वा PayPal मा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ:
अग्रिम 30% जम्मा, बी/एल को प्रतिलिपि को बिरुद्ध 70% ब्यालेन्स।
उत्पादन वारंटी के हो?
हामी हाम्रो सामग्री र कारीगरी ग्यारेन्टी। हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो उत्पादनहरु संग तपाइँको सन्तुष्टि को लागी हो। वारंटी मा वा छैन, यो हाम्रो कम्पनी को संस्कृति को ठेगाना र सबैको सन्तुष्टि को लागी सबै ग्राहक मुद्दाहरु लाई हल गर्न को लागी हो
के तपाइँ उत्पादनहरु को सुरक्षित र सुरक्षित वितरण ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ?
हो, हामी सधैं उच्च गुणस्तरीय निर्यात प्याकेजि्ग प्रयोग गर्दछौं। हामी खतरनाक सामानहरु को लागी विशेष जोखिम पैकिंग र तापमान संवेदनशील वस्तुहरु को लागी मान्य कोल्ड स्टोरेज शिपर को उपयोग गर्दछौं। विशेषज्ञ प्याकेजि and्ग र गैर मानक प्याकिंग आवश्यकताहरु एक अतिरिक्त शुल्क लाग्न सक्छ।
कसरी ढुवानी शुल्क को बारे मा?
ढुवानी लागत तरीका तपाइँ सामान प्राप्त गर्न छनौट मा निर्भर गर्दछ। एक्सप्रेस सामान्यतया सबैभन्दा छिटो तर धेरै महंगा तरीका हो। Seafreight द्वारा ठूलो मात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो समाधान हो। ठ्याक्कै भाडा दरहरु हामी मात्र तपाइँलाई दिन सक्छौं यदि हामी राशि, तौल र तरीका को विवरण जान्दछौं। कृपया हामीलाई थप जानकारी को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्।
अमेरिका संग काम गर्न चाहानुहुन्छ?
Tianshan टाउन औद्योगिक पार्क, Yangzhou शहर, Jiangsu प्रान्त को उत्तरी उपनगर